Khilaaf u dhexeeya lammaanaha isqabta ee ku saabsan gudniinta - Rabbi Michael Avraham
Muranka u dhexeeya labada isqabta ee ku saabsan gudniinka
Jawaabta > Qaybta: Guud > Muranka u dhexeeya labada isqabta ee ku saabsan gudniinka
Pine Waxaa la weydiiyay 2 sano ka hor
Aamiin yaa rabi iyo ciid wanaagsan
Haddii ay soo baxdo kiis ah inuu jiro khilaaf u dhexeeya laba waalid oo ku saabsan gudniinka ilmaha. Sharci ahaan iyo/ama akhlaaq ahaan, qolo doonaysa gudniinka ma loo oggolaadaa? Mise waa in xaaladda la hakiyo oo ubadku ha doorto markuu weynaado?
mikyab Shaqaale Waxaa loogu jawaabay 2 sano ka hor
Waxay ku xiran tahay heshiisyada labada lamaane ee bilowgii hore (markii ay is guursadeen). Haddii aanu jirin ogolaansho cad oo aan laga soo saari karin xabsiga (tusaale ahaan caadada ka jirta deegaankooda) iwm, markaas waxay iila muuqataa in damiir ahaan qofku u ogolaado in ilmuhu doorto marka uu weynaado.
Shiinees iyo madhalays Waxay ku jawaabtay 2 sano ka hor
Akhlaaqda ka timid xeer diimeed maya?
Oo haddii ay isku dhacaan diinta iyo akhlaaqda halkan, ma samaynaysaa tixgelin dhuleed oo ma doorbidaysaa akhlaaqda? (Runtii, waa maxay sababta aan kuwan guud ahaan loogu isticmaalin ilmaha? Tusaale ahaan meelaha sharciga ama bulshadu aanay ogolayn kelmad)
mikyab Shaqaale	Waxay ku jawaabtay 2 sano ka hor
Diinta hubaal maaha. Iyo in diidmada hooyadu ay meesha ka saarayso waajibkii aabbaha?
Maan fahmin su'aasha ku saabsan dhulka. Waa maxay xidhiidhka?
Tirgits Daaran Kacitaanka iyo dhicitaanka Bennett iyo macnahooda (Column 486)
Seudat D. David Malka Moshiach Daaran Kacitaanka iyo dhicitaanka Bennett iyo macnahooda (Column 486)
Devar Torah ilaa Malwa Malka Daaran Kacitaanka iyo dhicitaanka Bennett iyo macnahooda (Column 486)
Isaxaaq b. Daaran Kacitaanka iyo dhicitaanka Bennett iyo macnahooda (Column 486)